Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | The Official Blog Of Dr Chit Nge (© 2009 – 2017. All Rights Reserved)
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ စာအုပ် အညွှန်း Video
Posted on October 30, 2015 by chitnge
ယနေ့ညနေ ၄ နာရီ မြ၀တီရုပ်မြင်သကြားတွင် ထုတ်လွှင့်ပြသသွားသော
ဗုဒ္ဓစာပေဆုရ စာရေးဆရာကြီး ဒေါက်တာချစ်ငယ်(ဒဿန)ရေးသားသည့်
လေးစားစွာဖြင့် – Admin (www.chitnge.com)
Posted on October 20, 2015 by chitnge
မြတ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ စာအုပ်ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ စာအုပ်ဆိုင်များနှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ ထွန်းဦးစာပေ၊ နဂါးစာပေ တို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆရာ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များသို့ –
Posted on February 23, 2014 by chitnge
တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်းများတွင်
တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ် နံနက် ၉း၃၀ ခန့်တွင်
ထုတ်လွှင့်မည်ဟု သိရှိရကြောင်း သတင်းပေးအပ်ပါသည်
Posted in Frontpage	| Comments Off on ဆရာ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များသို့ –
Posted on February 11, 2011 by chitnge
Welcome to Dr Chit Nge’s Website
အဘိဓမ္မာ တတိယနှစ်ကျောင်းသားက မေးတယ်တဲ့ —
“နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့သွားလို့ ရသလားဆိုတာကို စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကတော့ မရဘူးလို့ပြောနေလို့ တပည့်တော်တို့ သင်ရတာကတော့ ရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ဟာယူရမှာလဲ”
ဒီအခါ ဆရာသမားလုပ်သူက “အေး သင်ထားတဲ့အတိုင်း ယူပေါ့ကွာ”
လို့ ဖြေလိုက်တယ်တဲ့ ဒါက တော်တော် မသင့်တော်တဲ့ အဖြေတစ်ခုပဲ။
နိဗ္ဗာန်ကို ရုပ်နာမ်နဲ့ သွားလို့မရဘူးဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားက အတိအလင်း ဟောထားတော်မူတာပဲ။ ရုပ်နာမ်က ဒုက္ခတုံးပဲ။ နိဗ္ဗာန်က ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန်။ ဘယ်လိုလုပ်စံဝင်နိုင်မှာလည်း။ ဒါကို ရုပ်နာမ်နဲ့တော့ သွားလို့မရဘူး ဆိုတာလောက်တော့ ပြောပေးဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုပြောမပေးတော့ တကာ တကာမတွေလည်း ထင်ယောင်ထင်မှားတွေဖြစ်။ ကိုယ်ကတော့ ပရိသတ်စုတာပေါ့လေ ဒါပေမယ့် မမှန်မကန် ပြောတဲ့အခါကျတော့ ကျန်တဲ့ပရိသတ်လည်း နာတာပေါ့။
အဘိဓမ္မာကျောင်းသားလည်း သေတာပေါ့။ အဘိဓမ္မာသင်ပြီး ရုပ်နာမ်နဲ့ နိဗ္ဗာန်သွားလို့ရတယ်လို့ ယူထားရင်ကတော့ သေဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ဒီတော့ ဒါလေးတွေက ဘာသာ သာသနာမှာ မှန်တာကန်တာလေးတွေ အထိုက်အလျောက်ဖြစ်ဖြစ် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောမိထားရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒီလိုမှပြောမိမထားရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တွေ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလိုက်တာ အရမ်းအခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ရုပ်နာမ်နဲ့ သွားလို့ရတယ် ထင်မှတ်မှားသွားရင် သေရောပေါ့။
ရုပ်နာမ်ဆိုတာ ဒုက္ခ သွေးပြည်သလိပ် ဝဋ်ကောင်ပဲ။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အင်မတန် သန့်ရှင်းတယ် မွန်မြတ်တဲ့ ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန် တည်ရာပဲ။ ဒါတွေလောက်ကတော့ အခြေခံအားဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေး နားလည်ထားရင်ကောင်းတာပေါ့။ ဒါကို တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တာဝန်ရှိရှိ သစ္စာသိသိ ပြောပေးဖို့ကောင်းရဲ့သားနဲ့ မပြောဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ပရိသတ်ရဲ့ ခင်မင်လေးစားမှုကို မက်နေလို့ပဲနေမှာပဲ။ ဒီလို မက်လို့တော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ တရားကို ပိုမက်ရမှာပေါ့။ တရားကို မက်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ပါတယ်။
ဘာသာရေး သာသနာရေးဆိုတာ အင်မတန်ကျယ်ပြော နက်ရှိုင်းတယ် အားလုံးလည်းသိပါတယ်။ မိမိဘာသာကို မိမိမဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် နားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှ ဒီပြင်ဘာသာတွေအကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး ပြောချင်ရင်ပြောတာ အဆင်ပြေတာပေါ့။
မိမိဘာသာကို မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင် ကောင်းကောင်းမလုပ်သေးဘဲနဲ့ ဟုတ်တိပတ်တိ အမှန်ကိုထိုးဖောက်ပြီး အသိမရသေးဘဲနဲ့ ကျန်တာတွေလျောက်ပြောနေရင် အမှားမှားအယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို နံပါတ်ကုန်ပေါက်မြောက်အောင် လုပ်ဖို့က အဓိကပါပဲ။ ဒါက ပထမဦးဆုံး ဦးစားပေးရမယ့် လုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်။
အမြင်ဆိုတာ တည့်မတ်ဖို့တော့လိုတယ် အစစအရာရာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း တည့်တည့်မတ်ဖို့လိုတယ်။ စွေ့စောင်း ကောက်ကွေ့ တိမ်းချော်နေရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အမြင်ပါမကဘူး ဦးနှောက်ပါမမှန်ဘူး လမ်းချော်တယ် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မကောင်းဘူး ကိုယ့်ဇာတ်ကိုယ်မနိုင်ဘူးဆို ဒါလည်းဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ။ ရုပ်နာမ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာကို တချို့ကဇွတ်ငြင်းပြီးတော့ ကောင်းတယ်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အခုကျတော့ ရုပ်နာမ်မကောင်းကြောင်းကို တွေ့နေကြတာ နဖူးနဲ့ကျည်ပွေ့ တွေ့ကြပြီ။
တရားပလ္လင်ပေါ်မှာ မိမိမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အခုကျတော့ မပြောနိုင်ရှာတော့ဘူး။ ဒါက အမှန်တရားပဲ ကိုယ်တူဖြစ်တော့ ထုချင်တိုင်း လျောက်ထုနေတာ ပေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ပက်လက်လန် ခံရုံပဲရှိတာပဲ။ ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ ဓမ္မသဘာဝလမ်းစဉ်ပဲ။ ခေါင်းထောင်လို့တော့ ငြင်းမယ်မကြံနဲ့ ပိုပြီးတော့နစ်နာသွားမယ်မှတ်ပါ။ ဒီက မှန်တာကန်တာကို ပြောတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ မမှန်မကန်လာပြောရင် တည့်တည့်မတ်မတ်လာမပြောရင်တော့ ပိုပြီးတော့မြေလှန်တိုက်ဖို့ပဲ ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပေးပါတယ်။
တချို့ကလည်း သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်ကြတာ။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုတောင် တန်ဖိုးလျော့ပြီးတော့ ရောင်းစား စည်းရုံးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်လာကြတယ်။ ရှက်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာရဲ့ အဖိုးတန် တန်ဖိုးကြီးမှုတွေကို ဖျက်လိုဖျက်စီးနဲ့ လျော့ချပြီးတဲ့နောက် လျော့ဈေးပေါ့ဈေးနဲ့ ရောင်းစားတာကတော့ သာသနာဖျက်လို့ ပြောရင်တောင်ရတဲ့အကြောင်း သတင်းကောင်းပေးလိုပါတယ်။
လူလုပ်တယ်ဆိုတော့ မှားနိုင်မှန်နိုင်တာပေါ့။ သဘာဝက ပေးထားတာဆိုတော့ မှားနိုင်မှန်နိုင်တယ်လို့ ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ ဒါက သဘာဝရဲ့ ပေးထားချက်ကိုး။ အဲဒီ သဘာဝရဲ့ပေးထားချက်ကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် သီအိုရီ Continue reading →
သူတော်ကောင်းကို တွေ့ရန်မှာ တဖွဖွပြောနေရုံဖြင့် မရပေ။ ကိုယ်တိုင်က သူတော်ကောင်းဖြစ်မှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်က Continue reading →
တကယ်တော့ တော်တော် မှားယွင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကို Continue reading →
လောကအလယ်၌ အသက်ရှင်သန်ကြရာ အခက်အခဲ ပြဿနာများကတော့ ရှိမည်မှာ သေချာသည်။ သင်္ဘောကြီးတစ်စင်း သမုဒ္ဒရာထဲသွားလျှင် လှိုင်းတွေ အထပ်ထပ်တွေ့ရသကဲ့သို့ အခက်အခဲပေါင်း မြောက်မြားစွာ တွေ့ရမည်သာဖြစ်သည်။
အခက်အခဲတွေ့တိုင်း ငိုညည်းနေ၍ မရချေ။
အခက်အခဲတွေ့တိုင်း လက်ဖြန့်တောင်းခံနေ၍ မရချေ။
အခက်ခဲတွေ့တိုင်း ဒေါသူပုန်ထ၍ ဆန္ဒပြနေ၍ မရချေ။
အခက်အခဲတွေ့တိုင်း မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ လောကကြီးကို စိတ်ချဉ်ပေါက်နေ၍ မဖြစ်ချေ။
အခက်အခဲတွေ့လျှင် ဖြေရှင်းရမည်၊ ကျော်လွှားရမည်၊ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရမည်၊ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထလုပ်ရမည်။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ၀ီရိယ Continue reading →
တစ်စုံတစ်ခုတွေ့တိုင်း ငိုညဉ်းနေလို့တော့ ဘယ်ရမလဲ။ လောကကြီးမှာ ဒီလိုဆိုရင် ငိုညဉ်းစရာချည်း ဖြစ်မှာပေါ့။ (အနောရထာ အလိမ်ခံရတယ်) တို့ (ပုဂံငိုညည်းတယ်) တို့ စတဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးပြီး ပုဂံကို နှိမ်သလိုလို Continue reading →
Nirvana is the world beyond. So, it is different from the ordinary world. The world beyond means it is free from the world. At Nirvana, there is no character of the world such as suffering, changing and non-ego. When you want to enter into Nirvana, you have to leave your mind and body. Only the intuition or wisdom will go into Nirvana as Magga Nyanna and Phala Nyanna.
So, when we are doing meditation, we are taking care of constructing Magga Nyanna and Phala Nyanna. This means we are focusing seriously on the changing activities of mind and body. Nirvana is very unique Continue reading →
Tags: Buddhism, English Posts, Magga Nyanna, Phala Nyanna
နိဗ္ဗာန်မရောက်လိုဘဲ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနှင့် သံသရာလည်မည်ဆိုလျှင်တော့ ရပါသည်။ ကိုယ်ကြိုက်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်လုပ်နိုင်သည်။ တရားကိုအားထုတ်မယ် နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ် ဆိုလျှင်တော့မူ ရုပ်နာမ်၏ အပျက်ကို မြင်ရမည်။ အပျက်မြင် မဂ္ဂင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်နာမ်ကို ပယ်သတ်ပိုင်းခြား နိုင်မှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်ကို Continue reading →
ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တွေဟာ အမှန်အကန်ကို ကြိုက်တယ်။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင် ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလည်း ? နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှာ။ နိဗ္ဗာန်ကို သွားမယ်ဆိုရင် Continue reading →
အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အောင်မြင်လျှင် ပျော်မြူးရသည်။ အချို့လွန်စွာ ပျော်မြူးတက်ကြွကြသည်။
အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စား သင့်ပါသည်။ အောင်မြင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ အကျိုးတရားဟု ယူလျှင်ရသည်။ အောင်မြင်အောင် အကြောင်းခံခဲ့ရသည်။ အကြောင်းခံတရားများ စုစည်း၍ ပြည့်စုံ လုံလောက်သောအခါ အကျိုးတရားအဖြစ် ဖြစ်လာကာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
အကြောင်းခံတရား မရှိဘဲ အောင်မြင်သည် ဟူ၍တော့မူ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဤလောက၌ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ အကြောင်းခံမှ အကျိုးရမည်။ အကျိုးရလျှင် ပျော်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်ရန်အတွက် အကြောင်းခံရမည်။
ပျော်ရွှင်လိုပါသလားဟု မေးခွန်းထုတ်သောအခါ ပျော်ရွှင်လိုပါသည်ဟု အဖြေပေးလျှင် ပျော်ရွှင်အောင် အကြောင်းခံရမည် ဟူ၍သာ တိုက်တွန်း အကြံဉာဏ် ပေးရပေလိမ့်မည်။
ဤလောက၌ အကြောင်းခံသဖြင့် အောင်မြင်သောအခါ လွန်စွာပျော်ရသည်။ အချို့ လွန်စွာ မြူးတူးတက်ကြွကြသည်။ အောင်မြင်ခြင်းသည် လူအများ၏ နှစ်ခြိုက်ခြင်းကို ခံရသောသဘောဖြစ်ရာ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားစေချင်သည်။ အောင်မြင်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသင့်ကြောင်းအကြံပြု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
တရားအားထုတ်ခြင်းဟာ ကောင်းပါတယ် လွန်စွာမှလည်း ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ် သိဖို့လိုတယ်။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲ။ နိဗ္ဗာန်ကို ဦးတည်ပြီးတော့ ရည်မှန်းပြီးတော့ အားထုတ်ရတာပါ။ တရားအားထုတ်တာကတော့ တရားအားထုတ်တာပဲ။ ဘာဘာညာညာတွေ ဗဟုသုတရှိလို့ လျှောက်ပြောနေလို့တော့ တစ်ခြားစီပဲ။
တရားအားထုတ်တယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်ရင် ၀ိပဿနာကို ရှုရမယ်။ မရှုရင် မရဘူး။ စိတ်အစားထိုးဖို့ ဆိုပြီးအခု ပြဿနာတွေ တင်လာကြတယ်။ တော်တော်ကို ကမောက်ကမနိုင်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုပဲ။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ Continue reading →
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင် တစ်ချို့ကတော့ ပန်းတိုင်မရှိဘူးလို့ ကြွေးကြော်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ပန်းတိုင်ရောက်ပြီး အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာ မကြိုက်လို့၊ သူတို့က ဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားချင်လို့၊ အသိပညာအတွက် ရှာဖွေချင်တဲ့ သဘောကြောင့်ပါ။ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေပါ။ သူတို့က Continue reading →